China Nnukwu ebe a na-eme ebe a na-eme ebe a na-ahụ maka ngwa ahịa na ndị nrụpụta | Pijiang
Nnukwu ebe omume biya ebe a na-eme ya
Ndị otu PJM Brewery na-ejikọ ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe injin na-arụ ụlọ, ebe a na-azụlite, injinịa usoro, na-akpụpụta sistemụ idebe ihe ọcha yana sistemụ akpaaka & usoro njikwa. Nnukwu ebe omume biya biya. Ngwunye ebe a na-eme ebe a na-enwe ihe ruru tọn tọn 2000 kwa afọ, gụnyere ụlọ ezumike, gbaa ụka, ịgba mmiri, ejupụta na ebe a na-etinye akwụkwọ, yana ịtọlite ​​ebe a na-enweta mmiri, ebe a na - ekpo ọkụ, usoro CIP na ụlọ nyocha ọkachamara, ya na iru ogo SC nke kwekọrọ. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ị beerụ biya biya, nwere ike mejupụta ihe ndị ị na-emekpa ụlọ gụnyere ihe igwe ihe biya biya, otu biya, biya biya ma ọ bụ ahaziri iche.
Nnukwu ebe omume biya biya. Ngwunye ebe a na-eme ebe a na-enwe ihe ruru tọn tọn 2000 kwa afọ, gụnyere ụlọ ezumike, gbaa ụka, ịgba mmiri, ejupụta na ebe a na-etinye akwụkwọ, yana ịtọlite ​​ebe a na-enweta mmiri, ebe a na - ekpo ọkụ, usoro CIP na ụlọ nyocha ọkachamara, ya na iru ogo SC nke kwekọrọ. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ị beerụ biya biya, nwere ike mejupụta ihe ndị ị na-emekpa ụlọ gụnyere ihe igwe ihe biya biya, otu biya, biya biya ma ọ bụ ahaziri iche.
10. Ihe ngosi CAD, enyemaka ntinye, nzukọ, ọzụzụ. "
China na emeputa 50L 100L mini conica…
2000l ebe omume biya biya igwe 10BBl comm ...
Akpaaka ulo oru nnukwu microbrewery Steam j ...
2000 liter home microbrewery biya akụrụngwa br ...
50bbL 500hl 5000l nnukwu biya ebe biya biya turnkey p ...
biya biya igwe ihe conical biya fermenter 2 ...